နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Injection မှိုပလတ်စတစ်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ(24 များအတွက်စုစုပေါင်း Injection မှိုပလတ်စတစ်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်ကုန်များ)
Injection မှိုပလတ်စတစ်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ Injection မှိုပလတ်စတစ်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား Injection မှိုပလတ်စတစ်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် Injection မှိုပလတ်စတစ်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ များထဲမှ Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. ။
tag ကို: high-တိကျစွာ Automotive မှို , injection မှိုပလတ်စတစ်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ , အကြီးစားအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု
ကြီးမားသောအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများပလပ်စတစ်ဆေးထိုးတန်ဆာ, ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုမော်တော်ကားစားသုံးမှုကင်, မော်တော်ကားအမြီးပန်းကန်, ဆီမီးခွက် bracket ကအဖြစ်အကြီးစားမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ, ထုတ်လုပ်မှု,...
tag ကို: မော်တော်ယာဉ်ဘန်၏ injection မှို , မော်တော်ယာဉ်ဘန်၏မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း , မော်တော်ယာဉ်အကြီးစားဖုံးမှို
tag ကို: injection မှိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ , တိကျမှိုထည်ဆောက် , တိကျသောသေမှို
အရည်အသွေးဗဟိုပြုအဖွဲ့အစည်းကအဖြစ်ကျနော်တို့ပလတ်စတစ် Precise သေမှိုအစိတ်အပိုင်းများ၏ကျယ်ပြန့်အစအဆုံးအကုန်ကမ်းလှမ်းနေကြသည်။ အဆိုပါကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အကွာအဝေးသတ်မှတ်စက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းနှုန်းအဖြစ်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုပလပ်စတစ်ပစ္စည်းကို အသုံးပြု....
tag ကို: ပလပ်စတစ်မှိုနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု , ပလပ်စတစ်မှိုနည်းလမ်းများ , ပလပ်စတစ်မှိုစက်
နှစ်ချက်အရောင်ဆေးထိုးတန်ဆာဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့သို့မဟုတ်မမှန်ပုံစံနှင့်အတူတစ်ဦး Two-အရောင်ပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရရှိရန်နောက်ဆုံးဖို့, တဦးတည်းမှိုသို့နှစ်ခုကိုမတူညီတဲ့အရောင်ပစ္စည်းများထိုးသွင်းခြင်းဖြင့်ဆိုလိုသည်။...
tag ကို: မော်တော်ယာဉ်အပိုအစိတ်အပိုင်းများ , ပလတ်စတစ်ကန်ထရိုက် Thermosetting , Thermoplastics ထုတ်ယူခြင်းကန်ထရိုက်
tag ကို: injection မှိုကောင်းကျိုးများ , injection မှို Polish , injection မှို Clamp
tag ကို: ကြိုတင်မဲအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ , အစာရှောင်ခြင်း Injection ကိုမှို , ပလပ်စတစ်မှိုလုပ်ငန်းစဉ်
ရိုးရာဆေးထိုးတန်ဆာနှင့်နှိုင်းယှဉ်, ပလတ်စတစ်မှိုလုပ်ငန်းစဉ်၏နှစ်ဆရိုက်ချက်အောက်ပါအားသာချက်ရှိပါတယ်: တစ်ခုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမှ, တစ်ဦး core ကိုအလယ်တန်းပစ္စည်းပြန်သုံးကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ 230T, 250T နှင့် 550T...
tag ကို: ဖြစ်စဉ်ကို Injection ကို Tool ကို , ထုံးစံကိုနှစ်ချက်အရောင်ပလတ်စတစ်မှို , နှစျခု Shot မှို Overmolding
tag ကို: နှစ်ဦးကိုအရောင် Injection အပိုင်း , နှစ်ဦးကိုအရောင်မှို , နှစ်ဦးကိုအရောင်ကုန်ပစ္စည်းမှို
tag ကို: တိကျပုံသွင်းထားထုတ်ကုန်များ , တိကျပုံသွင်းထား Components , တိကျမှို Tools များ
Celcon လည်း polyoxymethylene (Pom), polyacetal, ဒါမှမဟုတ် polyformaldehyde အဖြစ်လူသိများ, acetal တစ်ဘုံအမှတ်တံဆိပ်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် thermoplastic ထူးချွန်ခိုင်မာခြင်း, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ wear ကမ်းလှမ်း, ခုခံခြင်းနှင့်ဓာတုအရည်ပျော်ပစ္စည်းခုခံ,...
tag ကို: အော်တိုအပိုအစိတ်အပိုင်းများ , မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ , တိကျမှို Tech မှ
tag ကို: injection မှို Tool ကိုအစိတ်အပိုင်းများ , စျေးပေါအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ , custom အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခိုင်မာခြင်း, ခွန်အားကိုသက်ရောက်မှုခုခံနှင့်အပူချိန်ခုခံ, ကျယ်ပြန့်မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပိုက်လိုင်းလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသောနှင့်ဆေးထိုးတန်ဆာ tool ကိုစိတျအပိုငျးလျှောက်လွှာဒေသများရှိပါတယ်။ ကို ABS...
tag ကို: injection မှိုဆက်စပ်ပစ္စည်း , injection မှိုဟော့ Runner , injection မှိုခေါင်းပေါက်
tag ကို: injection မှိုပစ္စည်း , အော်တိုခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများမှို , မှိုများတွင်မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများ
tag ကို: injection မှိုထောက်ပံ့ကုန် , Thermoplastic မှိုအပိုင်း , ABS Injection ကိုမှို
Thermoplastics ထို့နောက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန်တစ်ဦးမှိုထဲမှာအအေးအပူနေကြသည်။ အဆိုပါ Thermoplastic မှိုအပိုင်းအအေးပြီးတာနဲ့သူတို့ရဲ့မူရင်းအခြေအနေမှပြန်ပြောင်းနှင့် re-အရည်ကျိုပြီးထပ်မံအအေးနိုင်ပါသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, thermoplastics...
tag ကို: custom မှို Tool ကို , Precision Automotive အစိတ်အပိုင်းများ , မှို Tools များအပိုင်း
PP ပစ္စည်းနှင့်အတူထိုးသွင်းအဆိုပါတိကျစွာမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ။ polypropylene ထုပ်ပိုး, လျှပ်စစ်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကုန်ထုတ်လုပ်မှု, အိမ်သူအိမ်သားပစ္စည်း, မော်တော်ကားနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွင်း application...
tag ကို: ပလပ်စတစ် Injection ကိုလက်ဆောင် , မှိုလုပ်ခြင်း Tools များ , ပလပ်စတစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများ
polypropylene (PP) ကိုကမ်ဘာပျေါတှငျအမြားဆုံးထုတျလုပျပလတ်စတစ် Injection ကိုလက်ဆောင်ထုတ်ကုန်များ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ ယင်း၏ဓာတုခုခံ, elasticity နဲ့ခိုင်မာခြင်းကြောင့်လူသိများရမှာပေါ့, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခုခံ, insulator တွင်လည်းဂုဏ်သတ္တိများနှင့် transmission ။...
tag ကို: ပလပ်စတစ်မှို Tool ကို , ပလပ်စတစ်မှိုမြှောင် , ပလပ်စတစ်မှိုကာစ် Kit
ဆေးထိုးပလပ်စတစ်မှို tool ကို၏အထင်ရှားဆုံးအားသာချက်တစ်ခုမှာအိမ်ရာရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာပြုလုပ်အတူအပြန်အလှန်မှအဆုံးအသုံးပြုသူများအတွက်လက်ကိုင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဒါဟာအစဘက်ထရီနဲ့မော်တာများအတွက် socket...
tag ကို: ပလပ်စတစ် Tool ကိုမော်တော်ကား , injection မှို nozzle , injection မှိုစက်အစိတ်အပိုင်းများ
တစ်ဦးကပူပြေးသမား Injection ကိုမှိုစက်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အသုံးပြုမယ့်အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ပူပြင်းတဲ့အပြေးသမား၏အားသာချက်ကိုစနစ်တကျဒီဇိုင်းရေးဆွဲလျှင်, ပလပ်စတစ်တံခါးကိုများ၏အနေအထားမှစက်၏ဆေးထိုးတန်ဆာ nozzle...
tag ကို: ရှေ့ပြေးပုံစံ Tools များဒီဇိုင်း , injection မှိုပလတ်စတစ် , ပလပ်စတစ် Tool ကို Laptop ကို
ပူပြင်းတဲ့အပြေးသမားနည်းပညာကို အသုံးပြု. ဆေးထိုးမှိုပလတ်စတစ်စက်များသံသရာကြိမ်လျှော့ချခြင်းဖြင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်ကူညီပေးပါမည်။ သငျသညျစိတျအပိုငျးသန်းပေါင်းများစွာကိုထုတ်လုပ်ကြသည်အထူးသဖြင့်အခါ,...
မော်တော်ယာဉ်ဘမ်များအတွက် injection မှို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နှစ်ချက်အရောင်ပလတ်စတစ်မှို 550T Injection ကိုမှိုစက် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
OEM အမြင့် Precision နှစ်ချက်အသွေးအရောင်စုံ Injection ကိုမှိုအစိတ်အပိုင်းများ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နှစ်ဦးကိုအရောင် Injection ကိုမှို Precision အစိတ်အပိုင်းများ 230T စက် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နှစ်ချက်အသွေးအရောင်စုံ Injection ကိုမှို Overmolding မှို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Precision နှစ်ချက်အသွေးအရောင်စုံ Injection ကိုမှိုအစိတ်အပိုင်းများ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အဖုံးအဘို့အမြင့် Precision နှစ်ချက် Injection ကိုမှို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နှစ်ချက်အရောင် Injection ကိုမှိုစက် 250T မှိုလုပ်ခြင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
OEM Injection ကိုအသေးစားပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများပုံသွင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပလပ်စတစ်အပိုအစိတ်အပိုင်းများပိုငျးပိုငျးပလပ်စတစ် Injection ထုတ်ကုန်များ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အသေးစား Injection ကိုစက်အပိုင်းကို ABS ပလတ်စတစ် Tool ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပလပ်စတစ် Injection ကိုမှိုအပိုအစိတ်အပိုင်းများအသေးစားပလပ်စတစ်ပိုငျးပိုငျး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
injection မှိုအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများမော်တော်ယာဉ်ပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စိတ်ကြိုက်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများပလတ်စတစ် Injection ကိုမှိုထုတ်ကုန်များ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အမြင့် Precision အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ injection မှိုလက်ဆောင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပလပ်စတစ် Injection ကိုမှိုစိတ်တိုင်းကျအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများမော်တော်ယာဉ် Tool ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပလပ်စတစ် Injection ကိုမှိုလက်ဆောင်ဒီဇိုင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Hot Runner နှင့်အတူပလတ်စတစ် Precision Injection ကိုမှို Tools များ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale Injection မှိုပလတ်စတစ်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ from China, Need to find cheap Injection မှိုပလတ်စတစ်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on Injection မှိုပလတ်စတစ်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our Injection မှိုပလတ်စတစ်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ, We'll reply you in fastest.